Waa maxay terral? | Saadaasha Shabakadda
Monica Sanchez | | Dhacdooyinka saadaasha hawada, Saadaasha hawada
Noocyo badan oo dabaylo ah ayaa la kala soocayaa, midkoodna waa xeebta. Waxay ku dhacdaa dabeylaha safafka ama nidaamyada, waxayna si gaar ah caan ugu tahay aagagga xeebta ee ku wareegsan buuro.
Aan ka ogaano wax badan oo ku saabsan dabaylkan maxaliga ah ee ka dhaca gaar ahaan koonfurta Jasiiradda Iberian, iyo si gaar ahba ee gobolka Malaga.
1 Sidee buu terralku u unkay?
2 Waxaa jira noocyo kala duwan?
2.1 Terral xagaaga diirran
2.2 Terral qaboobaha qabow
3 Terralku miyuu ku fiican yahay dabaasha?
Sidee buu terralku u unkay?
Habeenkii, dusha sare ee baddu waxay haysaa kuleylka ay maalintii soo uruurisay in ka badan, halka dhulku si dhakhso leh u qabowdo. Hawada diiran ee kulushahay, hawada qabow ee dhulka ka imanaysaana meesheeda ayey galeysaa.
Badanaa waxaa loo maleynayaa inay tani tahay dabayl kulul maxaa yeelay waxay ka timaaddaa Afrika, laakiin runta ayaa ah waqtiyo aad u yar in dabeyl diiran oo leh qoyaan yar ay ka timaaddo koonfurta. Terral waa dabayl ka timaadda Woqooyi ama Waqooyi-galbeed.
Weli, waa nooc ka mid ah dabaysha taas inta badan ma jecla wax. Qaarkood waxay yiraahdaan waxay kaa dhigeysaa mid dareen la’aan ah, oo leh rabitaanka kaliya ee ah inaad taageere qaadato oo aad qaboojiso intaad cabtid soodhaha, haa, lagana ilaaliyo.
Waxaa jira noocyo kala duwan?
Runtu waxay tahay haa. Terral-ka, oo leh qayb ka mid ah Woqooyiga, waa dabayl u qaybsan laba nooc: diirimaad xagaaga iyo qabow xilliga qaboobaha.
Terral xagaaga diirran
Noocaan waxaa lagu gartaa ahaansho aad u qalalan oo diiran. Markaad ka soo degayso dhaadhaca buuraha ku teedsan dooxada, hawadu waxay kululaysaa cadaadis adiabatic ah. Taas macnaheedu waxa weeye, kororka degdegga ah ee cadaadiska awgood, waxay kasbatay tamar badan oo aysan sii deyn karin, sidaas darteed waa in lagu siiyaa mag-dhow ahaan heer-kulka kuleylka qoyaan la'aanta iyo kororka heerkulka gudaha, kaasoo loo yaqaan 'Foehn Effect'. Sidaa darteed, dusha sare ee biyuhu waxay u barakaceen dhinaca badda, sidaa darteedna biyaha qabow ee qoto dheer ayaa kor u kacaya, taas oo keeneysa, in kasta oo ay xaqiiq tahay inay aad u kulushahay, haddana dusha sare ee baddu waa qabow sii kordheysa. Ifafaaladan waxaa looyaqaanaa dhacdadii Soo-kicinta.
Joogitaankeedu wuxuu keenaa heerkulka ugu sarreeya Jasiiradda Peninsula in la duubo.
Marka la eego, laba nooc waa in la kala saaraa:
Mid ka yimaada Badweynta Atlantik oo dhex mara Galicia, kana gudba gebi ahaanba Jasiiradda Iberia.
Mid kale, oo ay yaqaanaan dadka reer Malaga, oo ka yimaada galbeedka oo, marka uu gaaro xeebta Boortaqiiska, soo jeesto, ayaa istaagaya qulqulka biyaha soo galaya waqooyiga Malaga, halkaas oo heerkulku kaco. Kadib, waxay kusii socotaa dhinaca Malaga, oo noqota dabayl woqooyi. Xiisad ahaan, in la yiraahdo dabaysha noocan ah ee Malaga waa mid maxalli ah, waxayna u muuqataa dhulal xeebeed gaar ah. Xaqiiqdii, had iyo jeer ma gaarto Rincón de la Victoria, oo qiyaastii 10km dhanka bari ka xigta.
Malagueños waxay badanaa sheegtaa in "galbeedku argagaxsan yahay" markay qaybaha dabaysha galbeed ka leexdaan waqooyi-galbeed ama woqooyi-waqooyi-galbeed, sidaasna ay ku soo saaraan ifafaalaha berriga.
Terral qaboobaha qabow
Dabaylaha noocan ah ayaa aad u soo noqnoqda, ugu badnaan waa 38% bisha Janaayo iyo ugu yaraan 4% bisha XNUMXaad. Waxay dhacdaa deyrta iyo gu’ga, iyo waxaa lagu gartaa inay tahay dabayl qallalan oo xoog badan oo duufaan ah oo cirka ka tagaysa gebi ahaanba nadiif. Waxaa soo saaray duufaan fog, taas oo, haddii xaaladaha ku habboon la buuxiyo, ay u roonaan karto sameynta daruuraha lenticular. Dabcan, halka dalka intiisa kale ay ku raaxeysanayaan (qaar ka badan kuwa kale) jiilaalka laftiisa, oo leh heerkul hooseeya iyo xitaa dhaxan, Malaga dabayshaas awgeed uma baahna inay soo saaraan dharkooda diiran). Laba nooc ayaa sidoo kale lagu kala sooci karaa:
Dabaysha catabatic ama dheecaanka: waxay ka soo baxdaa soojiidashada hawo qabow, oo hoos uga dhaadhacda dhaadhacda buuraha ee dhanka xeebta.
Midkale waa tii dabaylaha qaaradaha ka gudba Yurub kana soo gala Pyrenees. Markay keenaan raadad qoyaan ah, buuq wuxuu ka dhacaa leeyaha buuraha iyo, dabaysha, daruurta fadhiisata.
Terralku miyuu ku fiican yahay dabaasha?
In kasta oo lagu qasbay qof kasta oo ku sugan Malaga inuu isbedel ku sameeyo hawl maalmeedkiisa, sida ay khubaradu sheegeen, tan waa mid ka mid ah dabaylaha ugu fiican ee loogu talagaylaakiin waa haddii ay si fudud u afuufo. Xaqiiqdii, waxaa jira khubaro rumeysan in maalinta ugu habboon ee lagu tababbari karo cayaartan ay tahay marka ay si dhib yar u dhacdo wax dabayl ah.
Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad ku raaxaysato isboortiga aad ugu jeceshahay, inaad aaddo Malaga xagaaga waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican 😉
Illaa iyo hadda gaar noo ah mid ka mid ah dabaylaha maxalliga ah ee ugu muhiimsan Spain, terral. Muhiim ... oo aan u fiicnayn dad badan, laakiin caan ka ah aagga gacanka halkaasoo ay ku raaxaystaan ​​cimilo diiran oo Mediterranean ah, oo aan lahayn heerkul aad u hooseeya. Adigana, weligaa ma maqashay isaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Waa maxay terral?
Waa maxay falaadhaha ultraviolet